Inona no atao hoe sakafo tsara ho an'ny bisikileta? - Mpitaingina Bisikilety
Tena > Mpitaingina Bisikilety > Sakafo bisikileta - ny fomba hamahana izany
Sakafo bisikileta - ny fomba hamahana izany
Inona no atao hoe sakafo tsara ho an'ny bisikileta?
Soso-kevitra isan'andromihinanaALAMINO MIALOHA
Sakafo maraina - oats / atody.
Sakafo maraina maraina - Voankazo / yaorta.
Sakafo atoandro - Sandwich mofo / paty vita amin'ny mofo feno / navoakan'ny paty tamin'ny alina talohan'io.
Sakafo atoandro tolakandro - voankazo / fonosana voanjo tsy masira.
HarivaSAKAFO- Sombin'akoho / trondro / hena mahia hafa misy Vary / Pasta / legioma.
ambany tavy vs karbaona ambany
Ny fitsangatsanganana lehibe dia ny fiaretana mahatalanjona sy ny fampisehoana tanjaka ary mametraka fitakiana lehibe amin'ireo mpitaingina azy izay manohitra azy ireo. Amin'ny lafiny iray, ny atleta dia mila solika betsaka hahazoana 'manodidina ny telo kilaometatra sy sasany kilometatra' amin'ny hafainganam-pandeha maherin'ny telo kilometatra sy sasany kilometatra, 25 kilometatra isan'ora. Fa amin'ny lafiny atsimbadika, tsy te-hihinana tafahoatra izy ireo handresy lahatra ny fahefany amin'ny lanjan'ny lanjany, izay tena zava-dehibe tokoa rehefa mandeha bisikileta. (Dramatic Music) Tonga tany amin'ny Giro d'Italiato aho mba hahalala bebe kokoa, niresaka tamin'i Nigel Mitchell, mpamatsy sakafo ny ekipa EF Education First Pro Cycling Team, ary niara-niasa tamin'ny ekipa Team Sky tamin'ny bisikileta UK.
Nigel dia niara-niasa tamin'ny atleta ambony, izay nahatratra fahombiazana lehibe tamin'ny fitsidihana lehibe, hazakazaka, ny zava-drehetra tamin'ny bisikileta kilasy ambony indrindra. Noho izany dia mpiara-miasa amin'ny filan-kevitra izy. Te hahafantatra fotsiny aho raha afaka manana pudding ireo mpamily.
Andao hojerentsika. (mozika milamina) Tsara ny tolakandro, Nige. - Tsara ny mahita anao, Riley. - Ie, ka andao hanomboka ny andro. - Okay. - Sakafo maraina.
Inona matetika no nohanin'ireo mpitaingina amin'ny fanombohana, alohan'ny an-tsehatra? - Eny, amin'ny sehatra mahazatra, maro ny olona no gaga amin'ny fomba ara-dalàna ny sakafo, ny sakafo ataontsika ho an'ny mpamily. I Tena tsara vintana izahay satria manana mpahandro mahavariana miaraka amin'i Olga ary izy dia tena manan-danja tokoa Mpikambana ao amin'ny ekipa. Tena ilaina tokoa izany.
Izy dia iray amin'ireo olona voalohany nifoha ary iray amin'ireo farany nandeha natory, saingy mora be izany. Hanomboka anao amin'ny porridge izahay, manana porridge foana izahay - tiako ny bubur. (Mihomehy) - Manana porridge foana ianao ary toy ny anay, fomba fahandro tena tsotra fotsiny izay ampiasain'i Olga amin'ny toerana anaovana rano fotsiny Ka tsotra fotsiny, tena nentim-paharazana - Izany no fomba Scottish - fomba Scottish, eny, fa izahay kosa tsy asiana whisky ao anatiny.
Tsy manana whisky sy crème isika, izay heveriko fa lehilahy Scottish nentim-paharazana kokoa, sa tsy izany? dia rehefa any Ekosy ihany aho. Manana porridge àry izahay ary manana omelety. Manana omelety foana.
Olga dia hanisa ny isan'ny atody azony rehefa lehibe ny antsika ary an-jatony izy io. Atody an-jatony sy an-jatony. Ary avy eo manana muesli ara-dalàna ihany isika, manana fromazy, manana pataloha.
Ara-dalàna tsotra fotsiny izany. - Ie. Izahay dia manandrana tsy mandeha be loatra amin'ny sakafo maraina, indrindra satria ianao manana ny rafitra misy gliosida marobe fotsiny, ary izay tianao hatao dia mameno ny rafitra fotsiny.- Marina.- Fa ianao koa.
Raha mila zavatra ao ianao, dia makà fotoana handevonana azy, ary izany no antony maha-atody azy tsara ho an'ny sakafo maraina satria atody miadana miadana ny atody, manampy proteinina ihany koa izy ireo amin'ny rafitra ka raha mihazakazaka izy ireo dia hanampy ny mpamily izany. fanarenana mandritra ny fotoana iainan'izy ireo - fanampiana tsy tapaka ny fanarenana - Eny, saingy ara-dalàna sy tsotra ihany ny sakafo ara-dalàna.- Eny.- Mandeha foana ny olona, ​​'Tsia, tsy mety ho tsotra io, tsy mety ho tsotra toy izany. '- Misy karazana proteinina, gliosida, karazana macronutrient izay tadiavinao hokapohina? - Eny ah, ka izay tadiavinay amin'ny fijerin'ny proteinina dia mikendry proteinina 20 grama, 20 ka hatramin'ny 30 grama.
Izay azonao fotsiny amin'ny sakafo ananan'izy ireo amin'ny sakafo maraina, dia fantatrao, omelety atody roa, ny oatmeal nohanin'izy ireo, angamba ham. Manome azy ireo mora foana ny proteinina 30 grama, ary raha ny fijerin'ny gliosida dia tena mitady grama iray kilao ny lanjan'ny vatana izahay, ary mora ihany izany fa tsy tratra amin'ny antsipiriany. Amin'ny porridge fotsiny, voankazo iray, mora be ho azy ireo ny manao izany nefa tsy noeritreretin'izy ireo akory ary tena io no hevitra.
Hiezaka ny hieritreritra an'ireo servings ireo aho. Na dia mampihena ny tsorakazo iray aza isika, zavatra toa ny gliosida. Miezaka ny hitandrina tsara ny vola izahay.
Manodidina ny 20 ka hatramin'ny 30 grama izany amin'ireo sakafo ireo. (Mozika upbeat) - Ary noresahinao fa tsy mitovy amin'ny dingana fohy kokoa, toy ny TT - Eny - Ka ahoana no fiasan'izany? - Ka TT Iray amin'ireo mitsikera zavatra, iray amin'ireo zava-dehibe indrindra, iray amin'ireo zavatra manakiana indrindra ny fampiononana ny vavony, ary mazava ho azy fa toerana mihoampampana izany rehefa mihemotra ianao ka miankina amin'ny fotoana hitsapana ny fotoana, fa fantatrao, mazàna mifoha ireo tovolahy rehefa amin'ny 2 ora ny fotoam-pitsaranao ary hanana ny sakafo maraina mahazatra izy ireo nefa ampahany somary maivana kokoa amin'ny fanaovana mitaingina kely, mizaha ary avy eo, telo, adiny efatra alohan'ny TT, misy ny mialoha- fihinanana hazakazaka sy ny hazakazaka alohan'ny hazakazaka -Manana sakafo mitovy foana izahay. Vary sy omelety fotsiny io - Rehefa mivoaka ambony sehatra isika, inona no hohanin'ireo mpitaingina mandritra ny seho iray? - Ka mandritra ny dingana dia kendrentsika ny hahatratrarana azy, arakaraka ny hamafiny, ary io dia ampahany amin'ny fiofanana izay tsy maintsy eritreretin'ireo mpitaingina irery satria tsy azonao lazaina amin'ny olona rehetra fa mila manana gliosida grama isan'ora ianao satria ny hamafin'ny fiofanana azon'izy ireo ka indraindray azonao atao ny miverina ny olona ary mijery ireo rakitra misy herinaratra ianao ary tsy mila miasa mafy izy ireo ary manana andro hafa izay andehanan'izy ireo fotsiny mandritra ny fotoana rehetra, dia ahoana izany isika ve? Raha mitaingina antonony tsara ianao dia miezaha mikendry gliosida 40 ka hatramin'ny 60 grama isan'ora.
Raha miasa mafy ianao dia manakaiky ny 60 ka hatramin'ny 80, na hatramin'ny 100 grama isan'ora aza. ary ny fomba fanaterantsika sakafo mahavelona amin'ny bisikileta dia toy ny rafitra maodely. Ka eo am-pananganana karazana fifanakalozana gliosida 20 grama isika, raha azonao izany.
Toy ny mofom-bary misy gliosida 20 grama eo ho eo, ny bar dia toy ny gliosida 40 grama, ka izany dia fifanakalozana roa. Miankina amin'ny zava-pisotro ampiasainay, mety mampiasa zava-pisotro misy gliosida 80-gram isika, ka izany no miovaova efatra ka miasa eo amin'io karazana rafitra io fotsiny izahay. Heveriko fa tsy takatry ny mpamily foana izany. - Ie, fa mijery an'io ianao. - Saingy fantatray, ka mandeha izahay rehefa manana tavoahangy iray ianao - S o rehefa manana tavoahangy 80 grama ianao dia ampy mandritra ny adiny iray izany, ary mirona hampiasa bebe kokoa an'ity sakafo gliosidrida ranoka ity rehefa teknika kokoa ny dingana , any an-tendrombohitra rehefa sarotra kokoa ny mihinana, na aoriana ny dingana, Ka amin'ny fiandohan'ny dingana, miankina amin'ny ataon'ny mpamily, mety tsy manana afa-tsy tavoahangin-drano iray sy tavoahangy fisotroan-fiara isika ny tavoahangy.
Ny zava-pisotro misy hazakazaka dia Scratch miaraka amina gliosida 20 grama. Mety ho lasa ray izy ireo amin'ny asany aloha, na fantatr'izy ireo fa mila miasa izy ireo, noho izany dia hampiasa gliosida 80 grama ao anaty tavoahangin'izy ireo izahay, ka omenay kely fotsiny avy eo ary izahay dia dia tena mahazatra amin'ny sakafo hazakazaka ampiasaintsika. Noho izany dia ampifangaroinay ny bara fivarotana ary ny mofom-bary ihany koa no ampiasainay.
Io no fihinanana hazakazaka lehibe indrindra sy malaza ary mahomby indrindra any. (mozika milamina) - Ny zavatra tiako horesahina dia ny sisa tavela amin'ny sakafo. - Eny, eny - Satria nisy zavatra nolazainao momba ny fisorohana ny mpamily amin'ny sakafo izay miteraka fitehirizana rano betsaka ao amin'ny tsinay - Eny, tsy dia mitazona rano loatra izany, misy betsaka kokoa ny vongan-ketsa, koa amin'ny zanatany, ny lehibe kokoa ny olona, ​​arakaraka ny maha misy azy, mba hanananao fitoerana kilao vitsivitsy ao amin'ny tsinay.
Midika izany fa mila mitandrina tsara ianao amin'ny microbiome, ny bakteria, zava-dehibe ny tsy hanaovantsika azy, ny tsy filalaovana azy loatra, ka indraindray dia ataontsika amin'ny dingana sasany izany ary tsy ataontsika. ataovy daholo ny Fotoana amin'ny mpamily rehetra, tena rehefa misy olona manenjika zavatra indrindra ary manao izany isika, manohana drafitra residue ambany izahay hany ka ny sakafo izay tsy tena lanin'ny vatana no esorinay, fa ny ataontsika dia mbola azo antoka. Izahay dia mahazo ny sasany amin'ireo fibre soluble hamahanana ireo bakteria, noho izany dia tsy misoroka ny fibra rehetra izahay, fa manandrana misoroka bebe kokoa amin'izany - More o Izay azontsika eritreretina momba ny fibre izay tena mamorona Broccoli faobe sa toy izany? - Ie ary, na mofo oatmeal, noho izany dia karazan-tsakafo tena tsotra dia ny fihinanana akoho sy vary na trondro ary vary ary avy eo misy ranom-boankazo miaraka aminy.- Mora kokoa ny mandevona.- Eny, iray amin'ireo ny zavatra hafa momba azy io dia, indrindra raha eo amin'ny herinandro farany amin'ny fitsidihana lehibe ianao, dia miakatra ny rafitra fandevonan-kanina.
Mba ho reraka dia mihinana salady be dia be ny mpamily, betsaka kokoa noho izay hohanin'ny olona mahazatra, ary noho izany amin'ny fibre rehetra dia afaka mahazo masirasira ao anaty vavony ianao, toy izany koa miaraka amin'ireo zavatra toy ny ranom-boankazo, raha ny marina, ny mifantoka ny otrikaina ary iray Manala ny ankabeazan'ny be loatra. (Mozika malaza) - Ahoana no niovan'izany hatramin'ny nahatongavanao tamin'ny bisikileta sy sakafo ara-pahasalamana matihanina? - Ie, heveriko fa nisy fiovana goavana. Midika izany fa tsara vintana aho tamin'izaho tamin'ny World Tour Level cyc. tonga ling satria niditra amina ekipa vaovao aho ka niditra an-danitra tao amin'ny ekipa izay nanararaotanay nanoratra indray ny lalàna ary kely dia kely ny loza mety hitranga raha tsy voatazon'ny fomban-drazana sasany izahay, mba hahafahanay manandrana izay tena nanandrana ary izay tiana hatao dia miasa ihany koa ankehitriny.
Maro amin'ireo fomba fanao ataontsika miaraka aminy izao no nampidiriko 10 taona lasa izay. Nandeha ny raharaha, fa ny hitantsika izao, ny ankamaroan'ny ekipa hafa dia nampiasa fanazaran-tena be dia be ihany koa, ary noho izany dia nifindra ihany ny zavatra tamin'ny ankapobeny, ka ny iray amin'ireo lehibe taloha, ny zavatra toa ny paty dia tena lasa tena matanjaka amin'ny bisikileta ampiasaina dia ampiasaina be izao. Averina indray, manao izany ny ekipa rehetra.
Zavatra toy ny ranom-boankazo. Fantatrao fa mihazakazaka ao amin'ny trano fisakafoanana ianao ary mahita ekipa maro misotro ronono izao. Ny zavatra toy ny mofom-bary dia tsy azoko ekena tanteraka satria i Alan Lib no nanao resipeo tamin'ny renibeny momba an'i Doi.
Nanao zavatra toy izany izy taona maro lasa izay, ary i Brad Wiggins no nilaza tamiko hoe: 'Oh Alan does ireto karazana hazo ireto' izay tena tsara amin'ny bisikileta. ' Ka naka ny sasany tamin'ireny recette ireny izahay ary nanitsy azy ireo ary manao izany izao indray ny ekipa ary fantatrao, hoy i Alan tamiko fa fony izy matihanina bisikileta 15 taona lasa izay dia nanesoeso azy ny olona satria niara-nandeha tamin'ny mpanao fahandroany izy. Noraisin'ny olona ny Mickey ary ankehitriny ny ekipa tsirairay dia misy mahandro efatra na dimy.
Ka nisy ireo fanovana ireo ary heveriko fa ny fifantohana amin'ny kalitaon'ny sakafo dia matanjaka kokoa noho ny tamin'ny 10 taona lasa. Ny ekipa rehetra izao dia manana mpahandro. Ireo ekipa ankehitriny dia mampiasa olona iray manana anjara asa mahavelona izay tompon'andraikitra amin'ny hetsika stratejika sy ara-pitantanana ny sakafo sy ny sakafo ao anatin'ny ekipa.
Ny kalitaon'ny vokatra ara-tsakafo dia tena nitombo tamin'ny fahitako azy, saingy heveriko fa nihatsara ny faharanitan-tsaina amin'ny fampiasana ireo vokatra satria tsy heveriko fa mihazakazaka fotsiny ny olona, ​​tsy maintsy mampiasa ireto bara ireto isika, mila mampiasa gels isika, manana hampiasa ireo zava-pisotro ireo dia mieritreritra isika izao hoe inona no tena vahaolana mety indrindra amin'ny zavatra tiantsika hatao, ka mieritreritra ny olana izahay ary ahoana ny fomba hanatonana an'io olana io, fa tsy ny zavatra tokony hataontsika fa manipy fotsiny isika io ary ezaha atao mba hiasa. (Mozika malaza) - Misy zavatra voatanisa lisitra mainty ve izay tsy azonao? - Ny fomba fiasako dia tsy dia tiako loatra ny fomba fanao didactic, tsara, ratsy. Ny tiako andramana sy ataoko dia ny Okay Okay, mino izahay fa manohana tontolon'ny fampisehoana izany, manohana ny sakafo fampisehoana, ary amin'izany ny sakafo tsy atolotray ny mpamily, raha zavatra tena tadiavin'izy ireo izany dia azon'izy ireo atao izany fa tsy azontsika. t mandrara azy - eny. - Raha azonao ny tiako ambara.
Ka raha misy mpamily mipetraka eo ary misakafo na misotro dia tsy hitsara azy isika amin'izany. Izay no safidintsika, ka heveriko fa ny iray ihany amin'ireo zavatra tena hialantsika amin'ny maha ekipa antsika, ankoatry ny fiakarana an-tendrombohitra, noho izany mahitsy amin'ny bisikileta, manalavitra ireo zavatra toy ny zava-pisotro mahery isika. Fantatrao ny colas.- Nalaza be izy ireo taloha.- Eny, tsia, tsia, tiako holazaina fa malaza be izy ireo, fa ny antony hialantsika azy ireo dia satria ambany dia ambany ny pH amin'ny zava-pisotro ary inona no ezahantsika hiarovana ireo mpamily. 'ny rafi-pandevonan-kanina mandritra ny hazakazaka ary rehefa be dia be ny sakafo misy asidra dia mety hisy fiantraikany amin'ny fomba fiasan'ny rafi-pandevonan-kanina vita amin'ny vera voasarimakirana izany fa ny antony tsy anomezantsika ireo mpamily dia satria io no ezahintsika lazaina tsy manohana izay tadiavintsika hahatratra trano fandraisam-bahiny io, mety hiteny izy ireo hoe 'andriamanitra aho tena mila kalina' ka mandehana maka iray fa tsy atolotray ho ekipa izany, fa ny kely kosa ampiasainay amin'ny dingana an-tendrombohitra satria Izany dia mety hamonjy sainam-panahy ho an'ny sasany amin'ireo mpitaingina azy, na dia tsy manohana amin'ny ankapobeny aza ny zavatra ataonay, fa amin'ity tranga ity dia manohana ny zava-bitan'ny zazalahy izy ary misy zavatra betsaka fotsiny ianao ka afaka milaza izahay fa ianao tsy afaka. - Ie, marina.
Misaotra betsaka anao amin'izany. Resadresaka mahafinaritra miaraka aminao toy ny mahazatra sy eny, tena mahaliana. - Okay. - Misaotra betsaka an'ity.
Misaotra an'i Nigel tamin'ny fahitany ny zavatra nohanin'ireo mpitaingin-tsoavaly. Heveriko fa tena mahaliana ary mieritreritra aho fa ny hafatra entina dia ny hihinananao karazana maro, sakafo tena betsaka izay mora levona, nefa azo ampiharina koa rehefa mila mamerina mametaka zavatra any amin'ny toerana hafahafa na amin'ny bisikiletanao ianao. Tena mahaliana ihany koa ny mahita fa ny mpampiofana sy ny mpahay sakafo dia manisy fiheverana ny fitakiana ara-batana isan'andro satria matetika tsy mitovy ny andro ary koa ny angon-drakitra fampisehoana sy ny sakafon'ilay mpanjaitra mifototra amin'izany.
Ary raha te hijery lahatsoratra bebe kokoa momba ny sakafo amin'ny bisikileta, tsindrio ilay kamio lehibe EF Education First ao aoriako.
Inona no nohanin'ny bisikileta amin'ny dia lava?
Loharanom-pototra kaloria voatondro: Atombohy amin'ny sakafo matanjaka, ao anatin'izany ny sandwich, ny baram-bary vita an-trano, ary ny bara fanaovana sakafo ara-panatanjahan-tena (ampirisihinay ProBar Bite). Tehirizo ho an'ny ampahatelony farany an'nymitaingina. Aorian'nymitaingina: Mipetraha amina sakafo be ao anatin'ny 60 minitra aorian'ny famitana nymitaingina.
Ny refuel dia iray amin'ireo zavatra mora indrindra azonao atao, saingy misy fiatraikany lehibe amin'ny fahombiazanao. Ary arakaraky ny halavitry ny dia ataonao dia vao mainka ilaina ny famenoana lasantsy. Mile mitaingina, na ny fanatanjahan-tena goavambe efa niomananao hatry ny ela, na fitsangatsanganana fahavaratra lava fotsiny, dia hasehonay anao izay hohanina sy oviana no hihinana azy, fa alohan'ny hanaovanay azy dia alao antoka fa misoratra anarana amin'ny GCN ianao raha mbola tsy nanao izany, ary tsindrio ihany koa ireo kisary lakolosy raha mila fampandrenesana sy manohana ny fantsona. (Dramatic Music) - Ny zavatra voalohany tokony ho fantatra momba ny famenoana solika mandritra ny dia lavitra dia ny tsy fanombohana ny famenoana solika rehefa tratranao amin'ny bisikiletanao.
Mila mieritreritra ny sakafonao ianao alohan'ny mitondra fiara, ary izany dia manomboka amin'ny sakafonao ny alina talohan'io. Te hanana sakafo matanjaka izay misy gliosida betsaka ianao. Angamba zavatra misy paty, vary, na quinoa mihitsy aza Ataovy ilay hadisoana mahazatra amin'ny fihinanan-kanina be loatra.
Na dia zavatra tsara aza ny fampidinana karbaona dia tianao ny hameno ireo karbohidraty naroso ireo, fa ny fihinana indroa izay nohaninao dia hamela anao hahatsapa ho volo sy malaina ny ampitso. Miezaha hihinana karbaona betsaka kokoa noho ny mahazatra anao; tena mila sakafo maraina GI mahavoky fo sy matavy ary ambany ianao. Ka zavatra toy ny porridge, Bircher muesli na oats iray alina no mety indrindra satria gliosida misy GI ambany izy ireo, izay midika fa avoaka miadana ny angovo.
Ho tsapanao fa maharitra kokoa ny tombony azonao. Ary te hisoroka ny sakafo matavy ianao satria manemotra ny fandraisany ireo gliosida tena ilaina ao amin'ny rafitrao. Ny fanendahana lalina dia mety tsy ny safidy tsara indrindra alohan'ny dia lehibe. (beat techno miadana) - Zavatra tsotra aloha.
Raha mandeha fiara lavitra ianao dia ento miaraka aminao ny tavoahangy roa. Ankehitriny, tavoahangy 750ml dia tena ilaina rehefa azonao atao ny mampiditra azy ao anaty sarinao. 500 io raha ny marina, fa ny 750 tsy hifanaraka amin'ny frame rehetra, indrindra fa raha manana bisikileta kely kokoa ianao.
Fa amin'ny farany, ny paikady fisotroana fidinao dia miankina amin'ny toe-javatra itondranao fiara. - Rehefa tena mafana dia mifantoha amin'ny fanananao electrolytes ao anaty zava-pisotro anao hanoloana ireo mineraly tena ilaina very amin'ny hatsembohana, ary raha azo atao dia manomàna teboka iray farafahakeliny amin'ny dianao hamoaka ny tavoahanginao. ary kitapo misy zava-pisotro mifangaro miaraka aminao ao am-paosinao na kitapom-batsy, rehefa mameno ny tavoahanginao amin'ny fahavaratra ianao dia tiako ny manana rano sy electrolytes ao anaty tavoahangiko hahazoana antoka fa mamakivaky ny hatsembohana mameno ireo mineraly very aho. Fa amin'ny ririnina dia tiako ny mameno ny tavoahangy amin'ny fifangaroan'ny gliosida ary mampiasa karazana vokatra manokana, kitapo misy fifangaroan'ny gliosida, azonao atao tokoa ny mahazo ny gliosida betsaka indrindra izay zakan'ny vatanao ao anatin'ny adiny iray.
Ny anton'izany dia satria izy ireo dia manana fifangaroan'ny siramamy mety hamela anao hahazo ny gliosida betsaka indrindra isan'ora, izay mety ho lehibe hanampiana anao hamono. (Mozika Techno) - Ento miaraka aminao ny sakafo tena izy isaky ny afaka mitaingina bisikileta lava ianao. Noho izany dia mety ho flapjacks, mofom-bary, akondro, na angamba sandwich kely aza.
Raha mahitsy ny paikadinao amin'ny famatsiana solika, ary reraka ianao, noana ary mety mitsoka, dia iray amin'ireo zavatra tsara indrindra hohanina dia ny gel angovo. Satria ny gela angovo dia tsy misy afa-tsy izay ilainao: solika, siramamy. Ary izany no tena mora entin'izy ireo ao anaty vatana.
Miaraka amin'izany ao an-tsaina, tsara foana ny mitondra gel angovo vitsivitsy miaraka aminao amin'ny dia lavitra. Fa tsy te hihinana gels angovo foana ianao. Manana betsaka amin'izy ireo izy ireo ary afaka! manomboka marary mafy.
Fa amin'ny resaka fiezahana manonitra ilay bonkotra mampatahotra dia miresaka amin'ny mpitaingina bisikileta efa za-draharaha izay hilaza aminao fa tsy misy toa azy. (Mozika Techno) - Klaika kely io, fa rehefa manomboka amin'izany ianao? Raha noana amin'ny dia lavitra ianao dia tena tara loatra. Tsy faran'izao tontolo izao amin'ny dia fohy, fa raha lany lasantsy ianao dia mety tsy dia lavitra ny trano ianao, fa esory ny tanako, dia tena tsy te ho lany solika antsasaky ny dia epic.
Tsy mahafinaritra izany. Ny kapila mahery dia misy fihinanana gliosida isaky ny 20 minitra. Mety ho antsasaky ny bar energie, gel na mofom-bary na zavatra toa izany.
Ary ny zavatra tadiaviko hatao dia ny geeky tsara tarehy, hataoko ary kasaiko ny sakafo ilaiko dia manangona kitapo mifanaraka amin'izany. Fa avy eo ampio bar fanampiny na gels fanampiny roa raha sanatria mila izany aho. Ohatra, raha somary mafimafy kokoa ny dia noho ny kasainao, na manomboka mahatsapa ianao fa tsy mandeha tsara dia io no fiantohana fiantohana anao, ireto ny tahirinao, ny anjara fanampiana vonjy maika.
Manantena aho fa nahita ity fijerena sakafo mahasoa tamin'ny dia lavitra ity ianao. Ary raha eny? , avy eo mba omeo ankihibe ny lahatsoratra. Tsy manana fialan-tsiny izao ianao raha manaiky ny epiko manaraka enina ora anao.
Ary raha te hijanona hydrate amin'ny fomba ianao, nahoana ianao no tokony? Aza mankany amin'ny fivarotana GCN ary mahazo tavoahangin-drano GCN Camelback. Ary raha te hahita lahatsoratra amin'ny fomba hafa ianao, tsindrio eto.
Mety amin'ny bisikileta ve ny akondro?
Akondrono voalohanybisikiletasakafo. Izy ireo dia mahay mandanjalanja tanteraka hanolo ny electrolytes very tamin'ny hatsembohana, indrindra ny potasioma ary koa ny fanomezana gliosida 25g-30g hanomezana angovo ho an'nybisikiletahozatra.
Voalohany amin'ny lisitray ny porridge na oatmeal. Tena tian'ny olona ity, indrindra eo amin'ireo proteinina, noho ny antony marim-pototra ary satria ny oats dia misy index glycemika ambany dia ambany ary ny dikan'izany dia ny famoahana angovo miadana sy maharitra izay tsara atomboka amin'ny Andro dia rehefa ianao tsy te hanana spikes siramamy tonga lafatra loatra ho an'ny fiara lavitra na hetsika henjana hafa ary tsy mila mankaleo koa izy ireo, azoko atao ny manamboatra voaloboka maina sy voankazo miaraka amin'ny siramamy mena ary ny an'i Simon Richardson antsika manokana antsika Ny fomba fahandro tonga lafatra nomena nandritra ny herintaona teo ho eo ny Fish dia sakafo mahery indrindra ho anay bisikileta, tsy vitan'ny hoe misy proteinina avo lenta hananganana ny hozatra na ho an'ny fampiofanana tuck, fa misy asidra matavy tena ilaina koa ary aza avela hampiala anao ilay anarana. , ireo no tavy tsara, ilain'ny vatanao ary ambonin'izany dia ho voan'ny vitamina B sy selenium ianao raha mahazo jema Ao amin'ny efitrano fisakafoana an-tsokoson'ireo ekipa bisikileta matihanina, mahita zavatra hita nandritra ny androm-piainana izay, miaraka amin'ny oatmeal, izay azo heverina fa avy any na karazana atody hafa, dia loharano proteinina lehibe hanombohana ny andronao, ary azonao atao koa ny manampy akora mahasalama fanampiny toy ny voatabia ary ny saxons Tinkoff tsara kokoa aza. Hana Graham dia nanoro anay ny fomba fanaovana omelette tonga lafatra ary azonao atao ny manamarina an'ity lahatsoratra ity amin'ny fipihana ny famaritana etsy ambany. Ny zava-misy fa ny bisikileta dia miara-miasa amin'i Inkafé dia mety tsy kisendrasendra aorian'ny kafeinina rehetra iray amin'ireo kely nanandrana sy marina ny fanafody fanoherana ary be dia be ny kafe, mitandrema kely fotsiny, na dia misy ny zava-pisotro lehibe azonao vidina amin'ny kafe maoderina aza ankehitriny, dia misy kaloria bebe kokoa mandritra ny sakafo iray manontolo, noho izany mifikitra amin'ireo kely kokoa, kafe mahery kokoa raha tsy manome ' t Want Fiercer and Better Performance Nitric Oksida dia nanjary teny lehibe teo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena raha vantany vao hita fa ny fanadihadiana manatsara ny fampisehoana dia nampiseho fa afaka mampitombo ny tanjakao sy manatsara ny fikorianan'ny rà na aiza na aiza mety ahaizanao azy tsara rehefa ao aminay ianao Afaka mahita izany inbeat ianao rehefa milelaka ny UK.
Afaka hitanao ao amin'ny Beattroopstrouble izany. Mila mihinana iray taonina ianao raha te hanana tombony amin'ny fampisehoana, ka mividiana alohan'ny roa na manaova zavatra toa ny nataontsika tamin'ity lahatsoratra ity, fa tsy mitovy amin'ny kalitaon'ny trondro dia voanjo ary jereo Tsara ihany koa izy ireo loharanon'ny proteinina sy ny menaka ilaina. Ny ohatra tsara dia misy voa voatavo almonds walnuts sy pistachios fa manandrama mampiasa kinova tsy voadio masaka ny vokatra.
Na ny dibera amandy na diberan-voanjo aza dia mety hanampy anao raha ampiana otrikaina be loatra ianao, saingy ampiasao kely rehefa mampiasa azy ireo ho sakafom-bidy satria be kaloria. Malaza any Etazonia amin'izao fotoana izao, ity rano voanio ity dia be potasioma, ambany kaloria ary mahomby kokoa noho ny rano taloha mahazatra, izay mety tsy ho an'ny tsiro rehetra, saingy fantatray fa be dia be ny ekipan'ny World Tour any. izay manana Manana tahiry be dia be ao amin'ireo hetra sy ekipan'ny ekipany ary mihinana amin'ny fotoana mety aorian'ny hazakazaka Ny vary dia fomba tsara hampiroboroboana ny fiterahana indray. Ekipa sasany no mitahiry azy ary mampiasa azy io mandritra ny hazakazaka atambatra amin'ny trondro na karazana atody, izany no sakafo faran'izay tsara aorian'ny fiasan-tsakafo tsirairay avy ny zava-maitso anao dia zavatra tadidin'ny maro amintsika fa nolazain'ny ray aman-drenintsika tamintsika mbola kely fa indrisy fa marina izy ireo. vitamina sy otrikaina be dia be ilaintsika ary loharanom-gliosida lehibe koa izy ireo mifanohitra amin'ny voankazo mamy dia manasarotra ny fihinanana legioma be loatra, nefa amin'ny farany azo antoka fa tsy misy iray amin'ireo sakafo ambanin-javatra tiany, flapjack, mora Ny mihinana dia misosoka fotsiny ao am-paosinao rehefa mitondra fiara ianao ary mahatsapa tsara ny manamboatra boot ary manome ny solika ilainao amin'ny dianao, ary be dia be ny fomba fanamboarana solika any, fa maninona raha atombohy amin'ny iray amin'ireo harenanao fonenanao manokana?
Tsara ve ny atody alohan'ny bisikileta?
Sakafo sakafo maraina matavy be syatody
atodydia safidy tsara ara-tsakafo amin'ny ankapobeny, fa raha tsindry mandritra ny fotoana ianao, dia omeo ny sakafo matavy sy feno proteinina (izany hoe, zavatra vita amin'ny bacon syatody) mandalo.7
Inona no sotroin'ny bisikileta rehefa mandeha?
Mitondrà tavoahangin-drano na manan-karena electrolytezava-pisotromiaraka amin'nymitaingina.rahaamin'ny halavanymitainginaeo anelanelan'ny adiny 1 sy 3,bisikileta tokonymifantoka amin'ny fanoloana karbaona. Raha tokony homisotroranonandritranymitaingina, makà tavoahangy vitsivitsy amin'ny fanatanjahantena manan-karbaonazava-pisotrotoy ny 1st Endurance's EFS Electrolytezava-pisotro.
Inona no tsy tokony hohaninao alohan'ny bisikileta?
Ao anatin'ny ora 2-4alohan'ny, mpitainginatokonyandramo ferana ity manaraka ity, satria fantatra tsara ireo fa miteraka alahelo amin'ny gastrointestinal (fivalanana, fikorontanan'ny tsinay): fibre be loatra, tavy be loatraENTANA NOVOKARINA, Masiaka tsy mahazatraENTANA NOVOKARINA, mihinana kafeinina tafahoatra, ary miharihary kokoa, toaka!
Fa maninona ny bisikileta no mihinana akondro?
Fa maninona no misotro Coke ireo mpitaingina bisikileta?
'Ny kafeinina dia naseho hampihena ny fahitana ny ezaka ary hampitombo ny fiaretana, ary hanatsara ny fifantohana mba hahatsapanao ho maranitra kokoa,' hoy i Bean. '70kghazakazaka am-bisikiletamila kafeinina 200mg eo vao mahatsapa ny vokany. favefanahymisotrofa betsaka nyCoke.
Misotro toaka ve ny bisikileta?
Natokonyianao, ho tombontsoan'nybisikileta, Mijanònamisotro toakatanteraka? Tamin'ny fiandohan'ny taona dia naseho fa voarara ny mpitaingina sy ny mpiasa rehetra ao amin'ny ekipa WorldTour Lotto-Soudalmisotromandritra ny sakana fanazaran-tena sy hazakazaka (ankoatry ny vola kely aorian'ny fandresena na fitsingerenan'ny andro nahaterahana).07/18/2020
Ny mpitaingina bisikileta ve mametraka ny akondro amin'ny pataloha fohy?
Miasa toy ny balsama, mampiasa vitamina voajanahariny, nyakondromifoka ny fahasosorana ary manasitrana ny ratrao tsy miankina amin'ny fahalalan'ny besinimaro, noho ny maoderinampitaingina bisikilety'kilaotyamin'nynytongotra mihombo. Raha mijaly ianao dia andramo ny fanafody.
Inona no tokony hohaniko amin'ny drafitry ny sakafo ho an'ny bisikileta?
Tsy maintsy mihinana hena / trondro isan-karazany ianao, gliosidratika sarotra, voankazo sy legioma isan'andro, ary misotro rano be dia be. Ity drafitra ity dia mifototra amin'ny karibonetra glycemika ambany navoaka miadana izay manampy manome angovo ho an'ny fotoana fanaovana fanatanjahan-tena.
Ahoana ny fomba hahazoana drafitra fihinanana bisikileta manokana?
Mitadiava inona no mety aminao amin'ity quiz 60-sec nankatoavin'ny manam-pahaizana ity ary alao ny drafitra bisikileta anao manokana & amp; sakafo noforonin'ireo mpanazatra Cycling Diet sy mpahay sakafo mahavelona.
Inona no tokony ho fantatrao momba ny sakafo ho an'ny bisikileta?
1. Manjifa ny fatran'ny kaloria mety ho an'ny bisikileta dia midika hoe manolo ny kaloria Karbohidraty izay ampahany manan-danja amin'ny sakafo ho an'ny bisikileta Manampy gliosida amin'ny sakafonao Mahasalama ny tavy rehefa io no karazana mety. Misotro amin'ny sofinao: tsy tombony an-jorony. Misakafo tsara aorian'ny fitsangatsanganana